crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Pope Francis oo yiri Islaamka, Yuhuudda iyo Kirishtaanka hal Ilaah ayay wada caabudaan! | HimiloNetwork
Pope Francis oo yiri Islaamka, Yuhuudda iyo Kirishtaanka hal Ilaah ayay wada caabudaan!
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka January 22, 2016	0 311 Views
Muqdisho (Himilonews) – Isaga oo booqanayey macbad Yuhuuddu leedahay oo ku yaalla Roma, Pop Francis wuxuu ka hadlay qalalaasaha, dagaallada iyo fad-qalalka dunida ka jira. Wuxuu sidoo kale xusay wax uu ku sheegay “Saddexda diimood ee isku Ilaahiga ah.”
“Dagaalka ninku ku qaado nin kale waa la isku maandhaafsan yahay gaar ahaan saddexda diimood ee samaawiga ah gudahooda–Islamka, Yuhuudda iyo Kirishtaanka. Noloshu waa deeq Ilaahay bixiyo,” ayuu yiri Pope Francis.
“Sanku-neefle kasta, ka uun Ilaahay ahaan, waa walaalkeen–u eegis la’aan xag diin, midab iyo wixii la halmaala,” ayuu sii raaciyey.
Towxiidnimadu waa rumeynta hal Ilaah oo aan wadaag laheyn. Marka sidaas loo eego, Pope Francis tani ma wuxuu kala jeedaa Islaamka, Yuhuudda iyo Kirishtaanka hal Ilaah ayay wada caabudaan?!
Previous: Waxyaalaha kugu qabsi kara inaad Mustaqbalka booqato Dubai
Next: Khilaafada Islaamka oo sheegtay inay ka xoreyn doonto Muslimiinta Kashmiir gumeysiga Lo’-caabudada Hinduuga ah
La kulan: Ninka Qaab-socodka Daanyeerka caadeystay 30-kii sanno ee lasoo dhaafay.
Tareenkii ugu horreeyey oo ka howl-galaya Makka iyo Madiina.
Jabhadihii Qabiilka ku salaysnaa oo isku bedelay Maamul Goboleed.
Muslim u dhaawacmay Badbaadinta Haweeney Xaamilo ah.